Akụkọ - Ihe Dị Iche Dị n’agbata Fabdị Dị Iche Iche, Gịnị Mere na Ejiri Antistatic Na-ahọrọ Polyester?
Polo uwe elu
Jacket na-enweghị mmiri
Anti-static echebe Akwa
T-uwe elu (nke nwere eriri na-emegide ya)
Ogologo ọkpa (ya na eriri na-emegide)
Jaketị (nke nwere eriri na-emegide)
Polo uwe elu (na Anti-static eriri)
Uwe Cotton (nke nwere eriri mgbochi)
Jaketị na-adịghị mmiri (ya na eriri eriri)
Owu Owu (nke nwere eriri mgbochi)
Nchebe nchekwa (ya na eriri na-emegide)
Uwe ejiji (nke nwere eriri mgbochi)
A na-akpọkarị owu. A na-eji eriri eme akwa na akwa. Owu owu nwere ike dị elu, ikuku ikuku dị mma, nguzogide ndagide na akụ adịghị mma; o nwere ezigbo okpomọkụ na-eguzogide, nke abụọ naanị hemp; ọ nwere nguzogide acid siri ike, na-eguzogide ọgwụ iji gbanye alkali na ụlọ okpomọkụ; o nwere ezigbo mmekọrita maka akwa, dị mfe iji agba, chromatogram zuru ezu na agba agba. Uwe ụdị owu na-ezo aka na akwa yarn ma ọ bụ owu na ụdị owu chemical na-emekọ yarn.
Njirimara nke akwa owu:
1. Ọ nwere hygroscopicity siri ike na nnukwu shrinkage, ihe dị ka 4-10%.
2. Nguzogide Alkali na acid. Cotton ákwà bụ ejighị n'aka na inorganic acid, ọbụna nnọọ itughari sọlfọ sulfuric ga-ebibi ya, ma organic acid adịghị ike, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara mbibi mmetụta. Owu owu otumube inyi mgburudun̄. Ohaneze, itughari alkali enweghị mmetụta na owu ákwà na ụlọ okpomọkụ, ma ike nke owu ákwà ga ibelata mgbe ike alkali mmetụta. Enwere ike inweta akwa owu "mercerized" site na ịgwọ akwa owu na 20% caustic soda.
3. Mgbochi ọkụ na nguzogide ọkụ bụ ihe nkịtị. Na anyanwụ na ikuku, a ga-eji nwayọọ nwayọọ kpoo akwa owu ahụ, nke ga-ebelata ike. A ga-emebi akwa akwa akwa site na ime ihe dị elu ogologo oge, mana ọ nwere ike iguzogide ọgwụgwọ dị elu dị mkpụmkpụ nke 125 ~ 150 ℃.
4. Microorganism nwere mbibi na akwa owu. Ọ naghị eguzogide ebu.
Polyester a na-akpọ Cotton bụ ụdị akwa agwakọtara na owu na polyester. O nwere obere owu. Njirimara nke polyester owu nwere ma uru nke owu na polyester. Ngwunye owu ga - abụrụ ngwakọta nke owu na naịlọn? Cotton eriri bụ ụdị nke gbanwetụrụ polypropylene eriri. Mmetụta nsị isi nke eriri owu na-eme ka ọ dị nro, ọkụ, akọrọ, ịdị ọcha na antibacterial. Nnukwu uwe ime akwa akwa, akwa mmiri, T-uwe elu na ngwaahịa ndị ọzọ mepụtara ma mepụta site na ịba uru bara uru nwere uru nke nchekwa ọkụ, mmịpụta mmiri, nnweta mmiri, ihicha ngwa ngwa, antibacterial na ihe ndị ọzọ.
Spandex bụ nkenke nke polyurethane fiber, nke bụ ụdị eriri na-agbanwe. Ọ na-agbanwe nke ukwuu ma nwee ike ịgbatị oge 6-7, mana ọ nwere ike ịlaghachi ngwa ngwa na ọnọdụ mbụ ya na enweghị mgbagha. Ngwurugwu ya bụ ihe dị ka, polyurethane dị nro na nke nwere ike ịgbasa, nke na-eme ka ihe onwunwe ya dịkwuo mma site na ijikọta na akụkụ nke siri ike.
Spandex nwere ezigbo mgbanwe. Ike ahụ dị okpukpu abụọ karịa nke nke eriri latex, njupụta linear dịkwa mma, ọ na-eguzogide ọgwụ na-emebi emebi. Spandex nwere ezigbo acid na alkali eguzogide, ọsụsọ na-eguzogide, oke mmiri na-eguzogide, akọrọ ihicha-eguzogide ma na-eyi ndị na-eguzogide. A naghị eji Spandex n'ozuzu ya naanị ya, mana obere ya jikọtara ya na akwa ahụ. Kinddị eriri a nwere njirimara nke roba na eriri, ọtụtụ n'ime ha na-eji ya na akwa spundex yarn dị ka isi. O nwekwara silk spandex gba ọtọ na silk na-agbagọ nke spandex na eriri ndị ọzọ. A na-ejikarị ya eme ihe na akwa dị iche iche, nke ejiri akwa, kpara akwa na akwa na-agbanwe agbanwe.
Terylene bụ ihe dị mkpa dị iche iche nke eriri sịntetik, nke bụkwa aha ahia nke polyethylene terephthalate polyester fiber, nke a na-ejikarị maka akwa. A na-eji Dacron, nke a na-akpọkarị "Dacron" na China, maka imepụta akwa uwe na ngwaahịa ụlọ ọrụ. Polyester nwere ezigbo ọdịdị. Yedị polyester larịị, nke na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ nke a na-emegharị mgbe a na-edozi ya nwere ike ịdị ogologo oge mgbe a sachara ya ọtụtụ ugboro. Polyester bụ otu n'ime eriri atọ nwere sịntetik nwere teknụzụ dị mfe ma dị ọnụ ala. Ke adianade do, o nwere ike na-adịgide adịgide, ezigbo elasticity, adịghị mfe deform, corrosion na-eguzogide, mkpuchi, crisp, mfe asacha na ọkpọọ, wdg, nke ndị mmadụ hụrụ n'anya.
Maka ụlọ ọrụ nri ugbu a, ụlọ ọrụ microelectronics, ụlọ ọrụ coal, ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ na ihe ndị ọzọ, a na-eji akwa mgbochi eme ihe n'ime ha, na-arụkwa ọrụ na mgbochi mgbochi.
Dị ka anyị niile maara, dị ka isi nke uwe mgbochi: mgbochi akwa na-adị ọcha, nhọrọ ya na-emetụta mgbochi mgbochi nke uwe mgbochi. Dị ka otu n'ime mgbochi static super ọcha akwa, polyester ákwà na-mere nke polyester filament na mgbe ahụ na-eduzi eriri na-akpa ákwà longitudinally na latitudinally, nke ka nke pụrụ iche nhazi technology. Ihe kpatara Xiaobian ji kwado gị ka ị họrọ akwa polyester mgbochi static bụ na ọ bụghị naanị na ọ nwere ọrụ mgbochi ọfụma, kamakwa o doro anya na ọ na - egbochi eriri akwa ma ọ bụ ájá dị mma na - iguzogide okpomọkụ na ịsa mmiri na-eguzogide; A na-eji ya eme ihe na ụlọ dị ọcha nke ọkwa 10 na ọkwa 100. A na-ejikarị ya na microelectronics, optoelectronics, ngwá ọrụ dị mma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke ọkụ eletrik na-emetụta ma na-achọ ịdị ọcha dị elu.
Ebe ọ bụ na eriri polyester n'onwe ya dị ogologo, ya mere, ọ dịghị mfe ịmịpụta ibe ajị anụ, na njupụta nke akwa ahụ buru ibu, na-enwekwa nsonaazụ ájá dị mma. Mmetụta ihe a na-emepụta electrostatic nke ákwà ahụ bụ na a na-etinye n'ime ime akwa ahụ na waya na-eduzi (waya eriri carbon) nke nha anya, site na 0.5cm ruo 0.25cm.
Post oge: Jan-14-2021
HEBEI FCE SPECIAL PRODECTION APPAREL & ACCESSORIES CO., LTD,